Serivisy - CHANGZHOU DEDGE DECORATIVE MATERIAL CO., LTD
Amin'ny maha orinasa matihanina ny gorodona sy ny rindrina, DEGE Industry Inc dia afaka manome endrika gorodona sy rindrina an'arivony hamaly ny filan'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao. Izy io koa dia manome serivisy OEM, toy ny fametahana ny marika amantarana ny mpanjifa sy ny marika amin'ny baoritra ary ny ao ambadiky ny gorodona na ny rindrina.
Fanohanana Agent Agent
Amin'ny maha matihanina mpanondrana gorodona sy rindrina azy, serivisy lehibe ny fanohanana ny mpanjifa hanokatra tsena. DEGE dia manome fitaovana fampiroboroboana tsena maimaimpoana ho an'ireo mpandraharaha marika, toy ny akanjo sy kitapo marika, katalaogy, talantalana mampiseho, santionany, fonosana marika, fitaovana fametrahana, sns.
Hatramin'izao, ny rindrinay sy ny rindrinay dia aondrana any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 60, noho izany dia hainay ny tsena sy vokatra isan-karazany. Mba hanomezana mpanjifa serivisy fitaterana haingana sy mety, manome vahaolana serivisy fitaterana an-tokana aho.
Ny orinasanay dia manana tantara maharitra amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasam-pitaterana sy fitaterana iraisam-pirenena lehibe. Hisafidy orinasa fitaterana mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa izahay, mba hahafahan'ny mpanjifa mankafy serivisy fitaterana milamina.
Amin'ny maha matihanina matihaninas ary rindrinas haingon-trano fitaovana mpamatsy, manana traikefa fanondranana mihoatra ny 10 taona izahay ary manana fahatakarana feno ny tsena samihafa. Azontsika atao ny manome ireto taratasy fanamarinana manaraka ireto ho an'ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpanjifa, toy ny fifanarahana, ny lisitry ny fonosana, ny faktiora, ny faktioran-taratasy, ny taratasy fananganana (FOME A, FORM E, FORM B, FORM P, FORM F, FORM N, FTA), Fumigation Certificate , Fanamarihana Phytosanitary, fanamarinana ny masoivoho, FSC, CE, Soncap sns.